Daty : 21/11/2014
Nasandratra ho olomasina tamin'ny 27 aprily 2014 ny Papa Joany XXIII sy ny Papa Joany Paoly II. Amin'ny fotoana toa izao dia misy hatrany ny fanontaniana vitsivitsy mateti-pitranga. Koa ezahina hapetraka sy valiana izy ireo ho an'ny Katolika izay mety tsy mbola mahalala izany indrindra, fa avy eo ho an'ireo izay mety liana koa na tsy katolika aza.
< Tsy mety diso ve ny Papa?
Ny Misterin'ny Karemy >